ပင်ပန်းလွန်းပြီး အိပ်​​ပျော်​​နေ​ပေမယ့်​ ​ရောင်းမယ့်​ပန်းကုံး​လေး​တွေကိုတော့ အောက်မကျစေချင်ဘူး - Real Gaming Myanmar
ပင်ပန်းလွန်းပြီး အိပ်​​ပျော်​​နေ​ပေမယ့်​ ​ရောင်းမယ့်​ပန်းကုံး​လေး​တွေကိုတော့ အောက်မကျစေချင်ဘူး
ယ​နေ့မြန်​မာပြည်​တွင်…မိသားစုရဲ့ အိမ်​စားရိတ်​ကို ကူညီပြီးရှာ​ဖွေ​နေရတဲ့..ဒီလိုက​လေး​တွေရဲ့ဘဝမျိုး အများကြီးရှိ​နေပါတယ်​… နေရာတိုင်းလိုလို အမြဲတွေ့နေရပါတယ် … ဆင်းရဲပေမယ့် တောင်းမစားဘူး … ပန်းရောင်းစားတယ် …
ပင်ပန်းလွန်းပြီး အိပ်​​ပျော်​​နေ​ပေမယ့်​​ရောင်းမယ့်​ပန်းကုံး​လေး​တွေကိုလက်​ထဲမှာ ကိုင်​ထားတာ မြဲ​နေ​ရောပဲ မြင်ရတာ စိတ် မကောင်း လိုက်တာ …..
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ချမ်းသာတဲ့ အလှူရှင်ကြီးတွေက ပြည့်စုံပြီးသားနေရာတွေမှာ သိန်းပေါင်း ထောင်သောင်းချီပြီး လှူနေကြတာ မကြာခဏတွေ့နေရပါတယ် ….
ပြည့်လျှံနေတဲ့ နေရာတွေမှာ ထပ်ထည့်နေမယ့်အစား ခုလို ကလေးတွေကို ကယ်တင်ပေးကြပါလားဗျာ. . ..သူတို့ရဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံးကို မကယ်တင်ပေးနိုင်ရင်တောင် ရောင်းနေတဲ့ ပန်းလေးတွေကို အားပေး ရင်း ကု သိုလ်လုပ်လို့ရပါ တယ် ……..
ကလေးလေးရယ် သနားလိုက်တာ …..
photo – Zayar Zayar
ပငျပနျးလှနျးပွီး အိပျ​​ပြျော​​နေ​ပမေယျ့​ ​ရောငျးမယျ့​ပနျးကုံး​လေး​တှကေိုတော့ အောကျမကစြခေငျြဘူး
ယ​နမွေ့နျ​မာပွညျ​တှငျ…မိသားစုရဲ့ အိမျ​စားရိတျ​ကို ကူညီပွီးရှာ​ဖှေ​နရေတဲ့..ဒီလိုက​လေး​တှရေဲ့ဘဝမြိုး အမြားကွီးရှိ​နပေါတယျ​… နရောတိုငျးလိုလို အမွဲတှနေ့ရေပါတယျ … ဆငျးရဲပမေယျ့ တောငျးမစားဘူး … ပနျးရောငျးစားတယျ …
ပငျပနျးလှနျးပွီး အိပျ​​ပြျော​​နေ​ပမေယျ့​​ရောငျးမယျ့​ပနျးကုံး​လေး​တှကေိုလကျ​ထဲမှာ ကိုငျ​ထားတာ မွဲ​နေ​ရောပဲ မွငျရတာ စိတျ မကောငျး လိုကျတာ …..
မွနျမာနိုငျငံမှာ ခမျြးသာတဲ့ အလှူရှငျကွီးတှကေ ပွညျ့စုံပွီးသားနရောတှမှော သိနျးပေါငျး ထောငျသောငျးခြီပွီး လှူနကွေတာ မကွာခဏတှနေ့ရေပါတယျ ….
ပွညျ့လြှံနတေဲ့ နရောတှမှော ထပျထညျ့နမေယျ့အစား ခုလို ကလေးတှကေို ကယျတငျပေးကွပါလားဗြာ. . ..သူတို့ရဲ့ ဘဝတဈခုလုံးကို မကယျတငျပေးနိုငျရငျတောငျ ရောငျးနတေဲ့ ပနျးလေးတှကေို အားပေး ရငျး ကု သျိုလျလုပျလို့ရပါ တယျ ……..
ကလေးလေးရယျ သနားလိုကျတာ …..
Previous: ခင်ချင်လို့ပါညလေးရယ်… ခင်တတ်ပါတယ်ကွီးရယ်..ဒီကစခဲ့တာပါ
Next: ၁၄ နှစ်အရွယ် ညဏ်ရည်မသန်စွမ်း မိန်းကလေး ဦးလေး(၂)ယောက်ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရှိနေ